Home News Xubno ka Socda Eritrea oo Markii Ugu Horeeysay Gaari doona Adis...
Xubno ka Socda Eritrea oo Markii Ugu Horeeysay Gaari doona Adis Ababa(Sababta)
Madaxweynaha Eritrea, Isaias Afwerki ayaa la sheegay inuu Wafdi u dirayo Addis Abeba, si ay wada-xaajood wax dhisaya ula yeeshaan Madaxda dalkaasi.
Danjiraha Dowladda Eritrea u jooga dalka Japan, Ambassador Estifanos Afeworki ayaa hadalkaasi ku sheegay Qoraal uu maanta soo dhigay bartiisa Twitterka ee @AmbassadorEstif
Danjiraha ma bixinin faahfaahin dheeraad ah oo ku adaan Wafdiga Eritrea ee la filayo inay booqasho ku tagaan Caasimadda dalka Ethiopia ee Addis Abeba.
Tallaabadaasi ayaa u muuqata mid ay Dowladda Eritrea ku soo dhaweynayso Baaqii uu Ra’isul-wasaaraha Ethiopia, Abiy Axmed waxa uu sheegay inuu doonayo inay Dowladda Eritrea la heshiiyaan, isla markaana Ciiddanka Ethiopia dib uga soo baxaan Degmadda Badame oo ku taalla xuduudka Labadaasi dal oo Eritrea looga qabsaday dagaalkii dhex maray labada ciiddan.
Dagaalkaasi oo bilowday bishii May ee sannadkii 1998-dii, waxa uu dhamaaday bishii June ee sannadkii 2000, iyadoo lagu dilay Kumanaan Askar oo labada dhinac ah.
Dhinaca kale, Idaacadda FANA ee taabacsan Dowladda Ethiopia ayaa baahisay hadalka ka soo baxay Madaxweynaha muddada dheer ka talinayey Eritrea, ee uu ku sheegay inuu Wafdi Nbaadeed u soo diri doono Addis Abeba.
Halkan ka akhriso Qoraalka uu Danjiraha Eritrea u jooga Japan soo dhigay bartiisa Twitter-ka:
Ambassador Estifanos‏ @AmbassadorEstif
Previous articleFarmaajo oo markii ugu horaysay safarkiisa ku wehlindoonanan Dowlad Goboleedyadda, Sabab?
Next articleMadaxweyne Muuse Biixi oo Socdaal Dhulka ah ku Mari doono Deegaano Colaad ay ka Jirto!!
Ganacsatada Al-shabaab Lacagaha Canshuuraha u Geeya loo Digay
Turkey in talks over Somalia space station and missions to the...